Ezama ukuthola ababengaphandle kwalelo zwe sifunani izinketho yasekuqaleni kakhulu futhi yesiteleka. Ngokwesibonelo, muva nje izivakashi Cyprus ethandwa kakhulu, okungaba kufanele kubhekwe kwelinye lamazwe ethandwa kakhulu ogwini Mediterranean. Yiqiniso, namaholide kungukuthi ophucwa okukhulu kakhulu kanti ezinye chips nemininingwane ezithakazelisayo, kodwa ngakolunye uhlangothi, it has ezinye amabhishi engcono. Inani elikhulu of Izibuyekezo hola ehhotela Adelais Bay Ihhotela * 3. Yiziphi izici zayo futhi kanjani ukukhetha amahhotela emazweni anjenge Cyprus? Zama ukuqonda.
Cyprus, njengoba kwaphawula u-abaningi, ukuphumula ngokuvamile kulinganiswa kanye negama, okungukuthi, zikhona ezingavamile ebusuku emaphathini, kodwa ngaphandle kwabo awukwazi ukukwenza. Mhlawumbe yingakho amahhotela zendawo bayathandeka bonke - intsha futhi imibhangqwana eshadile nezingane, imibhangqwana asebekhulile abafuna ukujabulela ukuphumula ethule futhi kukalwa. Ogwini engcono ezibhekwa ekhatsi Ayia Napa futhi Protaras. By the way, kule ndawo itholakala Adelais Bay Ihhotela 3 * - "Ukubhukha" ukubhuka ngokushesha ke inombolo efanele.
Protaras Iyidolobhana resort ezincane, okuyinto zihlukaniswa olunesihlabathi, coves enhle enamadwala. Le ndawo nje ephelele kuze kube iholidi ngaphambi umndeni. Njengomthetho, indawo leli dolobha ikhanga labo bagxile iholide okuphumuzayo kude ezinomsindo nokuxokozelayo Ayia Napa. Kuyaphawuleka ukuthi emashumini ambalwa eminyaka edlule e Protaras lakhula wamafeyi nezihlahla ezomile ngakho, kodwa umbuzo ukwakhiwa amahhotela ngisho Ngeke. Namuhla, lesi sifunda uye evuthiwe ingqalasizinda kanye inethiwekhi amahhotela ezahlukene - the kufinyeleleke kalula (isib, Adelais Bay Ihhotela 3 *) noma ezibizayo (isib, Constantinos Ebhishi Omkhulu 5 *).
Protaras iseduze Ayia Napa - nedlanzana kuphela amakhilomitha. Ungakwazi ukufinyelela edolobheni ngetekisi - ke kuyoba ngokushesha nangemali ephansi, futhi ophakathi kwamadolobha kanye suburban service ibhasi ibhasi. izivakashi eziningi zithi Protaras - cishe best romantic resort edolobheni, ubunjalo okuyinto igcwele kwenkundla omangalisayo wobuhle. Ngaphezu kwalokho, lo muzi ogcwele ezikhangayo ukuthi enze kube nokwenzeka ukuba ukufunda isiko kusuka ngaphakathi lizwe. Ngakho, ungahlala ngesikhathi Adelais Bay Ihhotela 3 * (Protaras) futhi vakashela enhle Cape yamaGreki, okuyinto seascapes abadumile. Amasiko asivumela ukulinganisa nemizana wezwe olunothile.
Ogwini best Cyprus
Protaras Itholakala bay kwi namathe isihlabathi, sizungezwe amawa. Ngenxa yokushoda umoya efudumele ngisho ebusika kanye samaholidi ihlala kusuka April kuya ngasekupheleni kuka-October. Uma uhlela ukuba njalo kolwandle, khetha ehhotela Nokho esisogwini umugqa wokuqala, futhi amazinga Ikamelo kufaneleke lapha. Adelais Bay Ihhotela 3 * isendaweni ulayini ebhishi yesibili, isigaba intengo Igumbi isitokwe itholakala kabanzi. Ogwini best emzini abhekwa esifundeni komkhiwane bay. Le ndawo ekahle bethamele ilanga, kanye namanzi ezemidlalo.
Adelais Bay Hotel Ihhotela 3 * itholakala ogwini lolwandle yesibili, eseduze nedolobha. Ibanga ukusuka ulwandle 200-1000 m kuphela, ngakho ebhishi kalula, ngisho nabakhulelwe abanezingane ezincane. Enye impikiswano esivuna indawo lapha izingane - endaweni eluhlaza Green Bay, okuyinto kubonakala setha kuze kube iholidi ngaphambi esimnandi ethangeni bemvelo.
Kukhethwa okunikelwe izivakashi inani amagumbi 81 amakamelo - ungakhetha eyodwa, kabili, kathathu noma quadruple Igumbi elivamile. Igumbi ngalinye stylish nenhle, futhi ifakwe wonke nemishini edingekayo futhi ifenisha. Amakamelo, kuncike indawo kuvulandi noma ithala. Njengoba kulindelekile, igumbi ngalinye ifakwe TV satellite, air-conditioning, ephephile, ucingo, umsakazo. Indlu yangasese has okugeza okugcwele zokugeza.
Ihhotela Izinsiza Adelais Bay Ihhotela 3 * (Protaras)
Ukwenza uzakwethu jikelele iyatholakala egumbini TV noma kwendawo yokudlalela. Uhlobo lokudla - ibhulakufesi kuphela. Njengoba inkonzo khulula olunikezwa baphathe nezambulela futhi ilanga loungers azungeze ichibi. Izikhungo Room, ukulethwa kokudla, exchange, zokuhlanza owomile nelondolo lizokhokhiswa.
ukunakwa okuningi ikhokhelwa ehhotela ukungcebeleka izivakashi. Ngakho, abadala ahlinzekwa i ongaphandle pool, sauna, ejimini futhi ithenisi enkantolo. Izingane ngalesi sikhathi kungase isala ngophethe noma uthumele in pool yezingane. Izinsiza zokuzivoxavoxa zihlanganisa izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza, futhi ungakwazi ukujabulela imenyu ngokukhethekile ezinganeni.
Nge ukutholakala amanani eziningi ezikhethiwe Adelais Bay Ihhotela 3 *. Ukubhukha - iyisevisi ekuvumela ukuba ngokushesha futhi kalula ukubhuka ikamelo. Protaras nje ephelele sokuzilibazisa zezingane, kanye amaholide umndeni e ubumsulwa imvelo, ubuhle futhi kuthule.
Njenganoma iyiphi enye indawo yokungcebeleka, Cyprus inikeza amathuba amahle kakhulu izivakashi lwezigaba ezahlukene, esukela isabelomali ezimbili inkanyezi ziphethe Amahhotela okunethezeka. Kuyaphawuleka ukuthi inkonzo enhle kakhulu ungaphakathi yiliphi ihhotela. Nokho, abaningi ukubuyekeza, wazi ukuthi amanye amahhotela nje elilungisiwe noma abadinga ke, Nokho, ngokuvamile ukhuluma ngani amahhotela ekilasini umnotho thina.
Mhlawumbe isici esiyinhloko Cyprus amahhotela yokuthi bengenayo ugu. Okusho ukuthi, uma ihhotela alivumelani kamasipala neziphathimandla, izambulela futhi sunbeds operation uzokhokhelwa. I Adelais Bay Ihhotela 3 * By endleleni, izambulela futhi loungers zinikezwa mahhala.
Yini ebaluleke kakhulu - ebhishi noma indawo?
Lapho ekhetha amahhotela, wonke okusekelwe izintandokazi zabo. Ake sithi othile ufuna ukuba ngiphume futhi nje uthole ogwini, othile wayekhathazeke kakhulu zonke ukudla ohlelweni "zonke okufakayo". travel ejensi, ochwepheshe ukweluleka: ukhethe indawo yokugoba amadlangala nsuku kwendawo. Ngokwesibonelo, e Protaras futhi Ayia Napa - olunesihlabathi eyayihambisana amatshe, amahhotela kuhluke ezingeni yeningi, kanye eliphezulu of service. Ngakolunye uhlangothi, kuba izindawo ethandwa kakhulu futhi ngenxa yalokho eziminyene, ngakho kuze kube iholidi ngaphambi okuphumuzayo kungcono makudle nezinye izindawo. Abaningi badonseleka emabhishi Larnaca futhi Limassol, okuyilona elisebenzayo futhi emelelwa lenqwaba amahhotela nganoma yisiphi nethuba lemali eningi.
Yokuzijabulisa futhi ngisebenza: inikeza eCyprus?
Adelais Bay Ihhotela 3 * - Ihhotela, okuyinto banake bonke abantu, kungakhathaliseki ukuthi umuntu omdala noma ingane. Kuyinto umndeni ngamakhasimende kanye edonsela izivakashi eziningi kuleli zwe. Ukuba khona izithombe zezingane - isiqinisekiso sokuthi abazali kuyoba isikhathi khulula bakwazi bazinikele, bengabheki mayelana ingane futhi yokuzijabulisa yakhe. Yini abadala kule ndawo yeholide?
Okokuqala, akekho ukhansele, futhi evamile lazy lolwandle iholide, nibusisa zonke izimo sale yokuchitha isizungu. Okwesibili, Cyprus lidumile abantu asebenzayo abakhetha sihlanganise ezemidlalo nokungcebeleka. A ezihlukahlukene zebhola nezinkantolo basketball, izinkantolo tennis - isiqinisekiso sokuthi, ngisho okuphumuzayo, ungakwazi ukubuka ifomu lakho.
Uma unquma ukuza Cyprus, hhayi ehlobo, khetha lawo amahhotela, alinikela kukhetfwe tinhlobo letibanti letikhetsiwe spa ukwelashwa - ngosizo lwabo ungenza uhambo lwakho okumangalisa ngempela. Ngaphezu kwalokho, uhambo Cyprus, isibonelo, zingakubiza kancane ebusika.
Ukubuyekeza: "elisho" futhi "ngokumelene"
Adelais Bay Ihhotela 3 * (Protaras) uye wathola omningi impendulo. Ngokwesibonelo, abaningi bathi yokusesha kwaphuma ehhotela zokusuthisa amathuba amancane zezimali futhi ngesikhathi esifanayo kwaba romantic and ezithakazelisayo. Amakamelo ukubukwa ulwandle mihle ngokwabo amakamelo ahlanzekile, yonke imishini isebenza.
Nokho, abaningi baye baphawula ukuthi kukhona nemibi, isibonelo, ikhokhwe ephephile - unayo zonke izinto ukuthatha nawe, ukuze singathwesi overpay. Ngaphezu kwalokho, hhayi kakhulu eduze izitolo - yiya kubo ngesikhathi sokushisa akuyona umcimbi ezimnandi kakhulu. Ngokwesibonelo, eshibhe futhi ngesikhathi esifanayo esitolo esikhulu lesingemaminithi lange-30, kodwa ungathola njalo ukudla okumnandi futhi fresh.
Amagumbi bahlanza nsuku zonke, ngakho igumbi ahlanzekile, kanye nabasebenzi ngokuvamile ihlukile I enobungane, okuyinto ebaluleke kwelinye izwe. An on-site uhambo kuyinto libanzi futhi ihlanzekile ngaso sonke isikhathi-swimming pool, okuyinto cishe never awunalutho. Kulokhu, kungenzeka nje kuphela ukuze sunbathe, kodwa futhi ukuba uchithe isikhathi esiningi esebenzayo, njenge ukudlala ithenisi, amabhiliyade noma volleyball. Okungenani mina wathola Izibuyekezo ezinhle futhi ebhishi itholakala okuwuhambo lwemizuzu engu-5 kude. Ubizwa ehlanzekile ngaso sonke isikhathi, inakekelwa kahle.
Kulabo abafuna ukuphumula okuhle futhi omuhle, ihhotela - nje godsend. Ngokwesibonelo, e ukubuyekeza uveza ukuthi imenyu kushintsha njalo ngesonto, ngakho ngeke ukwazi ukusho ukuthi ukudla okuyisidina. Nokho, phezu Adelais bay ehhotela 3 Izibuyekezo * futhi awukho emihle kakhulu. Ngokwesibonelo, abanye bathi leli hhotela internet eqolo. Sine ukuya amathilomu nezindawo zokudlela kanye ukusebenzisa i-Wi-Fi. Ngaphezu kwalokho, akubona bonke abantu abajabule nokuntula ukuzijabulisa - ababenakho ukuthola edolobheni, lapho ukuphila amathumba namathumba ebusuku. Nokho, njengoba kuphawuliwe, ngoba "izinkanyezi ezintathu" ehhotela, ngisho mibandela kwanele ukuphumula kahle.
Ngakho, yonke Izibuyekezo omuhle kungenzeka zib iziphakamiso ezilandelayo:
Kuhlala ekhatsi amakamelo ehlanzekile ukhululekile, okuyinto bahlanza nsuku zonke.
Ukuba khona uhlelo okuhlukene.
abasebenzi friendly ngubani bekulungele ukuphendula noma imiphi imibuzo.
Ukuba khona izithombe zezingane.
Amasimu Ezemidlalo nezinkantolo.
Okubhukuda - izingane kanye nabantu abadala.
Ukudla Amnandi futhi zihlukahlukene.
Phakathi bokwenza kukhona waphawula:
Ukuze i extra icala efrijini futhi iphephile.
Ukuze kolwandle ukuya imizuzu 40-50.
Izibuyekezo abaningi bathi ehhotela idonse wabo ithuba uphumule nge ukulahlekelwa sakugcina for the esikhwameni. Ngakho, ngo-September, izindleko le mvume ruble 22 000 umuntu ngamunye. Nokho, kufanele sibe eyinakekela kahle amanani angcono, ezihlinzekwa ngabaningi tour opharetha. Ngokwesibonelo, izindleko uhambo ngezinyawo izinsuku ezimbili eya 3-5 nge uhhafu-ibhodi kuzosuka 29 000 no-37 000 ruble. Inani lentengo ngekamelo ngalinye nangobusuku ngabunye iqala ruble 2100.
South Vietnam: izinto, isimo sezulu, amahhotela, amabhishi. Amaholide eNingizimu Vietnam
Ubungane timu ku amazwi Pushkin. Izisusa nobungane amazwi A. S. Pushkina
Indlela yokwenza umyeni wakhe lomshado ukumangala, ngakho uyithandile?